Madax Sare Oo Uu Kamid Yahay Madaxwaynaha DDSI Oo Caawa Kusugan Goobta Laga Wado Mashruuca Wayn Ee Abbay Iyo Waftiyadii Kaqayb Galayay Munaasibada Qaran Ee Qoomiyadaha Itoobiya Oo Maanta Badankood Galay Assosa - Cakaara News
Madax Sare Oo Uu Kamid Yahay Madaxwaynaha DDSI Oo Caawa Kusugan Goobta Laga Wado Mashruuca Wayn Ee Abbay Iyo Waftiyadii Kaqayb Galayay Munaasibada Qaran Ee Qoomiyadaha Itoobiya Oo Maanta Badankood Galay Assosa
Assosa(CN) Jimce.Dec.05.2014, Sida aad horey uga lasocoteen wararkayagii hore ee CakaaraNews waxaa maalintii shalay kasoo anbabaxay magaalada Jigjiga madaxwaynaha DDSI iyo masuuliyiin kuwahelinaysay, kuwaas oo u wajahnaa kaqayb galka munaasibada qaran ee maalinta qoomiyadaha Itoobiya ee 29 bisha Hidhaar oo ku aadan isniinta fooda inagu haysa laguna qabanayo magaalada Assosa ee deegaanka Benshangulka.
Hadaba waxaa maanta magaalada Assosa ee marti galinaysa munaasibadan ka anbabaxay madax sare oo isugu jiray federaalka iyo deegaanada oo gaadhay goobta mashruuca wayn ee Abbay oo u jirta magaalada Assosa ilaa 200 oo Km.
Madaxdan oo caawa kusugan goobta mashruuca wayn ee biyo galinta Abbay ayaa waxaa horkacayay Afhayeenka golaha Federeeshinka mudane Kasa T/birhan iyo madaxwaynaha deegaanka Benshangul-Gumuz mudane Axmed Nasir. Waxaana madaxdaasi kamida madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, madaxwayne kuxigeenka DDSI ahna wasiirka horumarinta magaalooyinka DDSI mudane C/xakiim Cigaal Cumar iyo Afhayeenka baarlamanka DDSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq. Waxaana halkaas caawa kusugan madax sare federaal iyo deegaanda isugu jira.
Dhanka kale waxaa maanta magaalada Assosa soo gaadhay waftiyadii kala duwanaa ee ka imanaysay deegaanada dalka, federaalka, iyo dalalka jaarka ah. Waftiyadan oo caawa kusugan magaalada Assosa ayaa waxaa ka mid ahaa qaybaha kala duwan ee martida.
Waxaana barito lafilayaa in ay waftida caawa joogata Assosa iyagana ay gaadhaan mashruuca biyo galinta oo ay halkaas ku kulmaan madaxda caawa u hoyatay halkaas.